Kooxaha Tottenham Hotspur, AC Milan iyo Inter Milan oo ku loolamaya saxiixa Cayaariyahan,, - Jazeera FM
Qaar kamid ah Xiddigaha Kooxda Mardid oo la kulmay Lewandowski, kaddib kulankii xalay
Chelsea oo kusoo biirtay tartanka loogu jiro Cayaariyahan Gareth Bale
Aabaha dhalay goolhaye Thibaut Courtois oo ku qalqaalinaya in uu ka boxo Bridge
Labo xidig oo katirsan Manchester United oo u sharaxan calaamada kabtanimo ee kooxda
Kumo ka tirsan sama fiinaalaha tartanka Europe League oo la Ciyaari doono, Arsenal iyo Atletico Madrid
Kooxaha Tottenham Hotspur, AC Milan iyo Inter Milan oo ku loolamaya saxiixa Cayaariyahan,,
April 16, 2018 admin featured
Kooxaha ku coltama Magaalada Milaano e AC Milan iyo Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa inay ku dagaalami doonaan saxiixa xiddiga Kooxda Ajax David Neres.
Sida laga soo xigtay Jariirada Calciomercato.com, Nerazzurri ayaa muujisay xiisaha ay u qabto Cayaariyahan Neres, ka hor inta aysan shaki galinin mustaqbalka Caairiyahanadeeda Antonio Candreva iyo Ivan Perisic, ku waas oo bilowgii xagaagan lala xiriirinayay Kooxaha Chelsea iyo Manchester United.
Website-yada kasoo baxa gudaha wadanka Talyaaniga ayaa sheegaya in Nerazzurri ay xaqiijin doonto qorshahooda xaga suuqa ee ku aadan Cayaariyahan David Neres, ka hor usoo bixitaanka tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo aadan.
Hogaamiyaha Kooxda Diavolo Gennaro Gattuso ayaa diyaarinayaa qiimo lacageed dhan €30m, si uu ugu garaaco Kooxda deriskooda ee Inter saxiixa Cayaariyahanka reer Brazil ee Neres oo 20-sano jir ah, kaas oo sidoo kale lala xiriirinayo Kooxda Tottenham Hotspur.
The post Kooxaha Tottenham Hotspur, AC Milan iyo Inter Milan oo ku loolamaya saxiixa Cayaariyahan,, appeared first on Wararka Ciyaaraha.
← Cristiano Ronaldo Oo Ka Shaleyay Iney Kala Tagan Saxiibatiisii hore ee..+SAWIRO
Marco Verratti oo ku sigtay u dhaqaaqista Kooxda Barcelona, ka hor bilowgii ololahan →